निर्वाचन क्विज २०७४ - समसामयिक - नेपाल
निर्वाचन क्विज २०७४
तपाईलाई प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ बारे कति थाहा छ ? आउनुस क्विज खेलौं ।
यही १० र २१ मंसिरमा गरी दुई चरणमा हुन लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन—२०७४ का मामिलामा तपाईँ कति साक्षर हुनुहुन्छ ? प्रायः मतदाताले निर्वाचन प्रक्रियालाई त्यति महत्व दिँदैनन्, केवल मतदानपछिको नतिजामा चासो राख्छन् ।
यस हाजिरीजवाफले निर्वाचनका आधारभूत तथ्य र प्रक्रियासँग तपाईँलाई परिचित गराउनेछ । र, आफूसँग भएको जानकारीको मात्रा आफैलाई थाहा हुन्छ । यसबाट एकैछिन भए पनि रमाइलो हुन्छ । खेल्न थालेको आधा घन्टाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्छ ।
अन्त्यमा तपाईँलाई प्राप्तांकसहित प्रमाणपत्र समेत मिल्छ । ५० प्रतिशत उत्तर मिलाउँदा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र पाउनुहुनेछ ।
यो लिंकमा प्रवेश गरिसकेपछि दायाँतिर स्क्रोल गर्नुहोला । त्यहाँ एउटा प्रश्न र चारवटा विकल्पसहिते उत्तर देखिनेछन् । एउटा उत्तरमा क्लिक गरेपछि ‘नेक्स्ट’ मा क्लिक गरी अर्को प्रश्नमा जान सकिन्छ ।